Manarona ny faritra rehetra ny 30.000 metatra toradroa, anisan'izany ny famokarana atrikasa, fitiliana foibe sy ny fitehirizana foibe. Full napetraka ny nandroso automatique fitaovana maherin'ny 120 miasa sy 5 mpiasa mpanara-maso matihanina kalitao no tompon'andraikitra amin'ny vokatra tsara. Fonosana atrikasa manarona ny faritra ny 2000 metatra toradroa, mpiasa 20 hanaraka ny fonosana fehezan-dalàna.
Misy 20 mpiara-miasa fitantanana ny 4000 metatra toradroa foibe fitaovana mandeha ho azy izay fitaovana amin'ny trano fanatobiana entana rafitra fitantanana sy ny rivotra sy ny hafanana mandroso fitaovana fanaraha-maso, ary manana fahaiza-manao milina fijinjana
Ny biraon'ny planina sy ny efitrano fampirantiana mandrakotra ny faritra ny 500 metatra toradroa, 10 mpandraharaha sy ny endrika no nanolotra ny vaovao an-jatony isan-taona teti-dratsy. Isan-taona, dia mamorona vokatra vaovao ho an'ny VIP katalaogy custmers.We dia faly ny hanaiky ny ODM na OEM filaminana.
ADDRESS Xinzhang Fampandrosoana Zone, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei, Sina 065701